10+ Caymiska Kiraystayaasha Ugu Fiican California | Liiska 2021 - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn 10+ Caymiska Kiraystayaasha Ugu Fiican California | 2022 Liiska
Dadku waxay waqti ku qaataan helidda meesha ugu fiican ee lagu noolaado California. Laakiin inta badan, xulashada caymiska kiraystayaasha ugu fiican waa uun sanduuq saxeexa heshiiskaaga.
Haddii aad kiraysato guriga fasaxa iyada oo loo marayo Airbnb muddada gaaban ama muddada dheer, caymiska kiraystayaashu waa caymis ay tahay inaad hubiso.
Caymiska kiraystayaasha ayaa kaa dabooli kara xatooyo, dab, ama deymo iman kara, sida eygaaga oo qaniinay deris.
Ha u ogolaan tan inay noqoto mid dambe. Ka dhig mudnaanta adiga oo dooranaya caymiska kiraystayaasha ugu fiican adiga iyo kiraystayaashaada.
Waa kan tusaheena caymiska kireystayaasha ugu fiican California.
Caymiska kireystayaashu waa caymis kaa ilaalin kara marka aad kiraysanayso guri ama guri, haddana tiro aad u badan oo kiraysteyaal ah ayaa maqan.
Sida laga soo xigtay sahanka Assurant, 45% kireystayaashu ma haystaan ​​caymis kiraystayaal, inkasta oo ay tahay qiimo jaban. Celceliska lacagta sanadlaha ah ee caymiska kireystayaasha waa $ 180, sida laga soo xigtay Machadka Macluumaadka Caymiska.
Waxaan qiimeynay dhowr shirkadood si aan u helno shirkadaha caymiska kireystayaasha ugu fiican California.
Darajaynteena, waxaan tixgelinnay qiimaha, heerarka daboolista iyo xaddidaadaha, adeegga macmiilka, iyo maaraynta sheegashooyinka si loo helo shirkadaha ugu fiican.
Akhri si aad u hesho adeeg bixiyaha saxda ah ee daboolaya baahiyahaaga caymis.
Waa maxay Caymiska Kirada?
Xeerka Caymiska Kireystayaasha waa xirmo daboolan oo loogu talagalay in lagu caawiyo ilaalinta kiraystayaasha ku nool guri ama guri.
Caymiska kiraystayaashu wuxuu ka ilaaliyaa kiraystayaasha kharashaadka waxyeelada hantida lama -filaanka ah ama xatooyada iyo mas'uuliyadda sharciga.
Qof kasta oo kireysta guri, kondho, guri, ama meel kasta oo kale oo ku nool wuxuu iibsan karaa caymiska kiraystayaasha.
Xeerka caymiska kireystayaasha caadiga ah waxaa ka mid ah saddex nooc oo caymis oo kaa caawinaya ilaalinta adiga, hantidaada, iyo xaaladaha noloshaada ka dib khasaaro la daboolay.
Akhri si aad u ogaato sida nooc kasta oo caymis ah u shaqeeyo.
Dadka akhriya maqaalkan, waxay ku dambeeyaan akhrinta: 10 Caymiska Nolosha Ugu Fiican Waayeelka Ka Weyn 80 Sannadka 2021. Fiiri!
Maxaa Caymiska Kiraystayaashu Daboolayaa?
Caymiska kiraystaha (oo mararka qaarkood loogu yeero “caymiska kiraystayaasha”) ayaa bixiya caymisyada dhacdooyinka lama -filaanka ah, oo sidoo kale loo yaqaan qatarta daboolan.
Waxaa laga yaabaa inaadan had iyo jeer awoodin inaad ka hortagto xaaladaha qaarkood, sida jabitaanka, xatooyada, ama dhaawaca soo booqde, waana halkaan Caymiska Kiraystayaasha.
Caymiska kireystayaashu guud ahaan wuxuu bixiyaa ilaalin maaliyadeed iyada oo loo marayo afar nooc oo caymis:
#1. Waxyeelada Hantida Shakhsiyeed:
Haddii hantidaada shaqsiyeed ay ku gaarto khatar daboolan, shirkadda caymiska kireystahaaga ayaa dabooli doonta kharashka waxyeellada ee ku jira xadka siyaasaddaada.
Khatarta la daboolay waa dhacdo waxyeello leh oo lagu xusay siyaasaddaada (ama aan si gaar ah looga saarin caymiska) sida dab, dabayl, ama xatooyo.
#2. Mas'uuliyadda Shakhsiyeed:
Haddii qof dhaawacmo ama hantidaada waxyeello u geysato oo aad qalad ku leedahay dhacdada, siyaasaddaadu waxay dabooli doontaa kharashyada deynta, oo ay ku jirto kharashka difaaca sharcigaaga.
Siyaasadda caadiga ah waxaa ku jira ilaa $ 100,000 oo ah caymiska mas'uuliyadda.
#3. Kharashyada Nolosha Dheeraadka ah:
Haddii gurigaaga ama gurigaaga kirada ahi uu noqdo mid aan ku habboonayn in lagu noolaado sabab la xiriirta khatar la daboolay, caymiska kireystahaaga ayaa bixin doona kharashyada ka badan kharashyada noloshaada caadiga ah.
Tan waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa luminta adeegsiga.
#4. Bixinta Caafimaadka:
Caymis xaddidan oo loogu talagalay kharashaadka caafimaadka haddii marti uu ku dhaawacmo gurigaaga.
Afarta siyaasadood ee kore waa waxa caymiska kiraystayaashu daboolayo.
Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyadda iyo caymiska hantida shaqsiyeed ee ay bixiyaan caymiska kiraystayaasha ayaan kaa ilaalinaynin dhammaan khataraha.
Tusaale ahaan, waxyeellada hantiyeed ee ka dhalata daadadka ayaan la dabooli doonin iyo daboolidda mas'uuliyadda dhacdooyinka ku lug leh eeyaha halista ah ayaa sidoo kale laga yaabaa in laga reebo.
Dabooliddu waxay kaloo ku koobnaan kartaa waxyaabo qaali ah oo qaali ah, sida dahabka.
Waa kuwan qaar ka mid ah caymisyada ugu badan ee caymiska iyo xaddidaadaha ee caymisyada kiraystayaasha:
Dhiqlaha iyo cayayaanka kale
Alaabta qofka kula deggan
Jadwalkani wuxuu muujinayaa noocyada kala duwan ee caymiska ee caymiska kiraystayaasha iyo waxa ay caadi ahaan daboolaan.
Waxa uu Daboolayo
Waxa Aan Daboolin
Waxyeelada Hantida Shaqsiga Kharashka lagu dayactirayo ama lagu beddelayo alaabtaada, sida dharka, alaabta guriga, iyo elektaroonigga, ilaa xadka siyaasaddaada Luminta hantida oo ka badan xadka caymiskaaga
Mas'uuliyadda Shakhsiga Dayactirka haddii aad si lama filaan ah u dhaawacdo hantida qof kale ama biilasha caafimaadka martida haddii lagu helo inaad masuul ka tahay dhaawacyadooda Ilaalinta mas'uuliyadda xadka caymiskaaga
Kharashka Nolosha ee Dheeraadka ah Kharashaadka dheeraadka ah ee aad gasho, sida biilasha hoteelka, haddii guriga aad kireysato uu dhaawacmo oo laga tago meel aan la degi karin Waxyeellada dhismaha dhismaha aad kiraysanayso
Bixinta Caafimaadka Caymis xaddidan oo loogu talagalay kharashaadka caafimaadka haddii marti uu ku dhaawacmo gurigaaga. Ha ka ilaalin khatarta oo dhan
Lacagta Caymiska Kiraystayaasha ma u qalantaa?
Caymiska kiraystayaashu waa hubaal inuu u qalmo.
Waa kuwan sababaha qaarkood.
Caymiska kireystuhu wuxuu kaa ilaalin karaa khasaaraha maaliyadeed oo leh qiimo jaban oo bille ah ama sanadle ah.
In kasta oo xereynta sheegashadu ay dhif tahay, waxaad awoodi kartaa inaad isku darto caymiska kiraystahaaga iyo caymiskaaga baabuurka si aad u sii yarayso kharashyada.
Ogsoonow marka dib loo eegayo siyaasadaha, waxay kaa caawinaysaa inaad barato jargon caymis, sida qiimaha beddelka iyo qiimaha lacagta caddaanka ah, si aad si fiican u fahamto baaxadda caymiskaaga.
Kharashka beddelku waa kharashka beddelidda shay, halka qiimaha lacagta caddaanka ah ee dhabta ahi uu yahay beddelka laga jaray qiimo -dhac kasta tan iyo markii aad iibsatay.
Sida Loo Gudbiyo Dacwadda Caymiska Kiraystayaasha
Haddii aad u baahan tahay inaad fayl garaysato sheegashada caymiska kiraystayaasha, ku bilow inaad u sheegto mulkiilahaaga sababta aad u xereynayso dacwad iyo waxa ay sheegashadu dabooli doonto.
Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay haddii sheegashadaadu la xiriirto dab, biyo ama waxyeello kale oo soo gaartay dhismaha saameeyey hantidaada. Waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay inaad ka hesho booliiska ama warbixinnada dabka, dukumentiyada dayactirka, ama dukumiintiyada kale milkiilaha si aad u dhammaystirto dalabkaaga.
Haddii hantidaada la xaday ama lagu dhaawacay dhac, waxaad u baahan doontaa inaad gudbiso warbixinta booliiska. Haddii sheegashada caymiska kireystahaagu uu la xiriiro dhaawaca martida, hubi inaad hesho macluumaadkooda shaqsiyeed, macluumaadka caymiska caafimaadka, iyo nuqulada dhammaan warbixinnada caafimaadka iyo biilasha.
Wac wakiilkaaga ama shirkadda caymiska kireystayaasha oo u sheeg sheegashadaada xigta. Waxaa laga yaabaa inay ku weydiiyaan macluumaad dheeraad ah oo aad u baahan doonto si aad u xereyso sheegashadaada. Waxay kaloo kuu sheegi karaan inta ay tahay inaad gudbiso sheegasho.
Markaad haysato dukumintiga oo dhan si habsami leh, waxaad ku xareyn kartaa dalabkaaga shaqsi ahaan xafiiska wakiilka, onlayn websaydhka shirkadda caymiska kiraystayaasha, taleefanka, ama barnaamijka shirkadda. caymiska kiraystaha.
Soo ururi liistada dhammaan walxaha waxyeelloobay ama la xaday ee u baahan in la beddelo. Qaadista sawirrada hantida burburtay ayaa iyaduna waxtar leh marka la xareynayo sheegashada caymiska kireystaha.
Halkee laga Helaa Caymiska Kiraystayaasha ugu Fiican California?
California waxaa lagu yaqaanaa kharashaadka hantida maguurtada ah ee sarreeya.
Si kastaba ha noqotee, California waxay leedahay magaalooyin waaweyn oo aad ka heli karto caymiska kiraystayaasha ugu fiican. Qaarkood waa kuwo la awoodi karo, halka kuwo kalena ay yihiin kuwo qaali ah.
Aynu eegno magaalooyinka ugu jaban ee caymiska kiraystayaasha ee California:
Waxaad filan kartaa inaad waxyar ka sii bixiso caymiska kiraystayaasha ee California haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah magaalooyinkaas:
Sidaan U Doorno Caymiska Kiraystayaasha Ugu Fiican California (Habka Darajaynta)
Si aan u helno 10ka ugu wanaagsan ee caymiska kiraystayaasha ee California, waxaan ku falanqeynay dhowr iyaga ka mid ah oo leh saddex sifo, oo kala ah:
La -awoodi karo (Qiimaha): Maxay kireystayaashu filan karaan inay iska bixiyaan caymiska California
Ikhtiyaarada Daboolista: Tayada caymiska caadiga ah ee shirkadda, iyo sidoo kale waxyaabaha lagu daro
Adeegga macaamiisha: Sumcadda shirkaddu siiso adeeg sheegasho joogto ah, degdeg ah oo caddaalad ah
Shirkadaha aan halkan ku hayno waxay matalaan isku -darka ugu wanaagsan ee qiimaha, fududeynta isticmaalka, daboolidda, iyo taageerada macmiilka.
Waa maxay Caymiska Kiraystayaasha ugu Fiican California
Hadda oo aad si dhaqso leh u fahanto sida caymiska kireystuhu uga shaqeeyo California, waa kan fursaddaadii aad ku heli lahayd shirkadda ugu fiican caymiska kireystahaaga.
#1. Beerta Gobolka: Guud ahaan Ugu Fiican
Beeraha Beeraha waa mid ka mid ah shirkadaha caymiska ee ugu weyn America. Madalkani wuxuu bixiyaa wax ku saabsan dhammaan noocyada caymiska ee kireystayaasha.
Laga soo bilaabo diiwaanka, Farm State wuxuu bixiyaa caymiska kiraystayaasha oo dhamaystiran qiimayaal tartan ah.
Beerta Dawladdu kuma qorto xirmooyin badan ama ikhtiyaarro kayd ah oo ku yaal goobteeda, laakiin waxay muujineysaa qiimo -dhimisyada isku -darka siyaasadaha caymiska baabuurkaaga iyo kireystayaasha iyo rakibidda aaladaha amniga guriga sida alaarmiga tuugada iyo qalabka qiiqa sheega.
Beerta Gobolka waxay bixisaa caymis kirayste oo dhammaystiran qiimayaal tartan ah. Waxaad caymiska kiraystayaashaada ku hagaajin kartaa baahida iyo dhaqaalaha qoyskaaga.
Hal dariiqo oo lacag loo keydiyo loona yareeyo lacag bixintaada bil kasta waa in la doorto ka -goyn sare. Waxaad jeebka ka bixin doontaa wax ka badan haddii aad leedahay wax sheegasho. Laakiin, weli waa hab aad naftaada ugu ilaalin karto buste haddii aadan qorshayn adeegsiga, laakiin aad u baahan tahay inaad buuxiso shuruudaha milkiilaha.
Beeraha Beeraha Gobolka iyo Qasaarooyinka
Ka hel xigashooyin toos ah khadka tooska ah, iyadoo daboolku ka bilaabanayo ugu yaraan $ 8 bishii Qiima dhimistu way ku kala duwanaan kartaa gobol ilaa gobol
Siyaasadaha waa la hagaajin karaa
Qiimo -dhimisyo badan oo boliis ayaa la heli karaa
#2. Liinta: Ugu Fiican Ardayda Kulliyadda
kuul waa mid ka mid ah shirkadaha caymiska kireystayaasha ugu cusub uguna hal -abuurka badan oo isku dayaya inay helaan siyaasad cusub sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud sida dalbashada Uber.
In kasta oo caymis -bixiyeyaasha kale ay qaadan karaan toddobaadyo si ay u xalliyaan sheegashada, Lemonade wuxuu leeyahay qiyaastii 30% sheegashooyinkaaga ayaa isla markiiba la bixiyaa markaad bixiso faahfaahinta dalabka shirkadda.
Lemonade waxay dooneysaa inay ruxdo warshadaha caymiska iyagoo ku deeqaya boqolkiiba inta soo hartay sadaqo. Qaabka gaarka ah ee shirkaddu waxay leedahay qaab dhismeed isku-fil ah oo caawiya dhammaan macaamiisha.
Lemonade waxay kaloo ku kordhisaa qiimaha siyaasadahaaga kirada ee caadiga ah iyadoo bixineysa daboolida qiimaha beddelka ee saamaynta shaqsiyeed halkii ay ka ahaan lahayd qiimaha lacagta caddaanka ah. Markaa waxaad awoodi kartaa inaad iibsato badeecooyin cusub oo beddel ah, xitaa alaab hore oo la xaday ama waxyeello gaartay.
Lemonade wuxuu hadda ku iibiyaa caymis Washington, DC iyo 27 -ka gobol ee soo socda: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, Nevada, New Jersey, New Jersey Mexico City, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, iyo Wisconsin.
Faa'iidooyinka Liinta iyo Qasaarooyinka
Dhimisyo badan ayaa la heli karaa si loo yareeyo khidmadaha Ka qaalisan kuwa tartamaya (qiyaastii $ 20 bishii)
Siyaasadaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah caymiska kaarka deynta ee la xaday
Daboolid fudud oo lagu daro alaab urursiga
#3. Amica: Ugu Fiican Dadka Waayeelka ah
Sida laga soo xigtay NAIC, Amica waxay u taagan tahay cabashooyinka macaamiisha ee yar ee ay hesho ee ku saabsan cabirkeeda iyada oo bixisa caymiska kiraystayaasha gobol kasta marka laga reebo Alaska iyo Hawaii.
Dhab ahaantii, 94% macaamiisha shirkadda ayaa xiriir dheer la leh Amica. Amica xitaa waxay bixisaa alaab hawlgab oo kor u qaadi karta kaydkaaga. Sicir -dhimisyada waaweyn waxaa ka mid ah daacadnimo, taas oo dhacda 2 sano ka dib shirkadda.
Waxa kale oo ay leedahay degel si sahlan loo isticmaali karo oo u oggolaanaya macaamiisha inay helaan xigashooyin, biilasha bixiyaan, soo gudbiyaan oo dabagal ku sameeyaan sheegashooyinka onlaynka wakhti kasta.
Si kooban, Amica waa shirkad caymis oo sax ah oo ku dari karta caymis dheeraad ah siyaasadda kiraystahaaga dahabka, elektaroonigga, iyo waxyaalaha kale ee qaaliga ah, ama iibsato caymiska qiimaha beddelka si haddii alaabtaadu wax yeelaan ama la xado, aad hesho wax kugu filan oo aad wax badan ku iibsato.
#4. Wadanka oo dhan: Caymiska Kiraystayaasha ugu jaban California
Haddii aad raadinayso caymiska kiraystaha ee jaban, geli Dalka oo dhan liiska hubintaada.
Runtu waxay tahay, Nationwide waxay leedahay qaar ka mid ah siyaasadaha ugu jaban ee dhammaan California.
Shirkaddu waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka aad ku waafajin karto siyaasaddaada baahiyahaaga. Waxaad badbaadin kartaa hal doolar adiga oo ku daraya caymiska shirkadda Valuable Plus ee alaabtaada aadka u qiimaha badan sida saacadaha, qadiimiga, ama dahabka.
Nationwide sidoo kale waxay bixisaa kaarka kaarka deynta oo kaa daboolaya kharash dheeraad ah oo ka dhan ah macaamil maaliyadeed oo khiyaano leh.
Ka sokow waxyaabaha aasaasiga ah sida hantida shaqsiyeed iyo caymiska mas'uuliyadda, siyaasadaha caymiska kireystaha ee Nationwide -ka waxaa ka mid ah caymiska kaarka deynta iyo daboolidda isku -darka/wax -ka -beddelka oo aan lahayn kharash dheeraad ah.
Tan micnaheedu waxaa weeye in lagugu daboolay kharashyo aan la oggolayn oo ku saabsan kaararkaaga amaahda iyo kaarkaaga deynta (ilaa xadkaaga siyaasadda), iyo haddii mulkiiluhu kuu oggolaado inaad hagaajiso gurigaaga, kharashyadaasna waa la daboolay.
Ugu dambayntii, Nationwide waxay siisaa macaamiisha qiimo dhimis aasaasi ah oo kala duwan iyadoon wax dalab ah la hayn, kuwaas oo leh siyaasado badan oo dalka oo dhan ah, ama leh qalabka dabka sheega iyo aalado kale oo ilaalin ah oo lagu rakibay guryahooda.
Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha Dalka oo dhan
#5. Toggle: Ugu Fiican Ganacsatada Guriga Ku-saleysan
Haddii aad leedahay meherad ama ganacsi dhinac ah, Toggle ayaa kaa caawin karta ilaalinta hantidaada shaqsiyeed iyo tan ganacsi.
Toggle caymiska kiraystayaasha ma daboolay meel kasta oo aad joogto. Marka, haddii aad tahay reer guuraa dhijitaal ah oo shaqo u socdaalaya ama meherad ka wada qolkaaga fadhiga, waxaa lagaa ilaalin karaa dhacdooyinka la daboolay sida luminta kombiyuutarkaaga, laptop -ka garoonka diyaaradaha ama dhaca inta aad safraysid.
Mararka qaarkood, xitaa waad ku dari kartaa daboolida xayawaankaaga ama xatooyo aqoonsi.
Si sannad walba oo aad daboolto oo aadan u soo gudbin sheegasho, Toggle wuxuu hoos u dhigi doonaa lacagta lagaa jaray si uu kaaga caawiyo inaad lacag ku keydsato dalabka.
Toggle siyaasadaha caymiska kiraystayaasha waa la habeyn karaa waxaadna ka dooran kartaa caymiska aasaasiga ah, oo ay kujirto mas'uuliyadda iyo daboolida ilaa $ 10,000 hantida shaqsiyeed, qorshe caadi ah haddii aad leedahay xoogaa hanti shaqsiyeed aad ku daboosho ($ 20,000), ama siyaasad caymis ah haddii aad leedahay alaab qaali ah oo la daboolo.
Toggle Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Si sahal ah ugu samee isbeddellada siyaasadda onlaynka Kaliya waxaa laga heli karaa Illinois, Wisconsin, Colorado, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Ohio, Utah, iyo Virginia
Ilaali qalabka ganacsigaaga
Lacagaha aan qaaliga ahayn, iyada oo khidmadaha laga bilaabo ugu hooseeya $ 6.25/bishii
#6. Caymiska Erie: Adeegga Macaamiisha ee ugu Fiican
Caymiska Erie wuxuu asal ahaan siiyaa mas'uuliyad iyo caymiska hantida shaqsiyeed ee kireystayaasha ku jira gobollada la daboolay, iyo sidoo kale daboolidda kharashyada nolosha.
Run ahaantii, Erie waxay iftiimisaa marka ay timaaddo adeegga macmiilka, iyada oo cabashooyin ka yar intii la filayay ganacsi baaxaddeeda leh.
Waxaad ku dari kartaa dhowr ikhtiyaar caymis oo dheeraad ah siyaasaddaada kirada ee Erie, oo ay ku jiraan waxyaabaha qiimaha leh sida dahabka ama farshaxanka iyo qiimaha beddelka alaabtaada.
In kasta oo Caymiska Erie uusan bixinayn baaxad juquraafi (kaliya laga heli karo Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia, Wisconsin, iyo Washington, DC), waxay bixisaa adeegga macmiilka haddii aad u baahan tahay inaad gudbiso sheegasho ama aad wax su'aalo ah ka qabtid siyaasaddaada.
Helitaanka $ 20,000 ee caymiska hantida shaqsiyeed iyo $ 100,000 caymiska mas'uuliyadda, tusaale ahaan, waxay kugu kici doontaa qiyaastii $ 150 sanadkii.
Faa'iidooyinka Erie iyo Qasaarooyinka
Caynsanaanta qiimaha leh ee qiimaha leh Ma jiraan ikhtiyaarro caymis oo lagu daro
Qiimo dhimisyo badan oo boliis ah Helitaan xaddidan
Adeegga macmiilka weyn
#7. USAA: Ugu Fiican Shaqaalaha Militariga
USAA waxay bixisaa caymis (iyo sidoo kale alaabada bangiyada iyo maalgashiga) si loogu adeego shaqaalaha milatariga, ruug -caddaaga, iyo qoysaskooda.
Sidoo kale, USAA waxay ku dadaaleysaa inay noqoto dooqa koowaad ee dhammaan baahiyaha caymis ee xubnaha milatariga, ruug -caddaaga, iyo qoysaskooda dhow.
Si aad ugu qalanto, waa inaad ka tirsan tahay 3dan kooxood midkood, laakiin haddii aad sidaas yeelato, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah qiimayaasha ugu fiican California oo dhan.
Shirkaddu waxay ku siinaysaa badbaadinta daadadka iyo dhulgariirka siyaasaddeeda caadiga ah, tusaale ahaan. Si ka duwan tartameyaasheeda, maahan inaad lacag dheeraad ah ka bixiso daboolyadan.
Marka laga reebo jihaynteeda milatari, waxa USAA kaga duwan shirkadaha caymiska kireystayaasha kale waa xaqiiqda ah in waxyeellada daadadka iyo dhulgariirka ay daboolayaan siyaasadeeda kireystayaasha caadiga ah.
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka USAA
#8. Is -dhaafsiga Xoriyadda: Adeegga Diiwaangelinta Dacwadda ugu Fudud
Liberty Mutual waa caymiska kiraystaha ugu fiican California inta badan kiraystayaasha. Waa shirkad caymis oo xoogga saarta hannaanka fulinta ballanqaadkeeda iyada oo u fududaynaysa in ay dacwad ku gudbiso khadka tooska ah iyada oo la raacayo hab tallaabo-tallaabo ah oo ku yaal boggeeda oo codsanaya faahfaahinta dhacdooyinka iyo sawirrada.
Waxa kale oo ay bixisaa qiimayaal la awoodi karo oo caymiska kiraystaha ah, iyadoo qiimo -dhimis la heli karo marka aad xidhmada caymiska xidhxidho ama marka aad tagto shan sano adigoon sheegan. Siyaasadaha caadiga ah waxaa ka mid ah caymiska mas'uuliyadda, hantida shaqsiga, lacag -bixinta caafimaadka, iyo kharashyada dheeraadka ah ee nolosha.
Caynsanaantu waa mid la awoodi karo oo kaliya waxay ku kacaysaa $ 13 bishii - qiyaastii $ 160 sanadkii. Taasi waa 23% ka jaban celceliska gobolka California. Qiimaha Liberty Mutual wuxuu ku kacayaa kaliya 80 senti bishii in ka badan State Farm, caymiska kiraystaha ugu raqiisan California.
Liberty Mutual Pros iyo Qasaarooyinka
Diiwaan gelinta dacwadaha fudud ee internetka Helitaanka qiima dhimistu way kala duwan tahay gobolba gobol
Hel qiimo dhimis marka aad xirmo xirmo
Hel caymis gaar loo leeyahay ugu yaraan $ 5 bishii
#9. Beeraleyda: Dukaamaysiga Caymiska Hal-istaag ugu Fiican
Waxa Beeraleyda ka soocaya inta kale waa tiro yar oo cabashooyinka macaamilka ah, marka loo eego baaxadda meheradda, iyo mareegaha isticmaalaha u fiican.
Shirkaddu waxay bixisaa caymisyada kireystayaasha caadiga ah, oo leh qiimo dhimis lagu rakibayo nidaamyada amniga guriga iyo in aan la cabbin.
Caymiska waxaa ka mid ah mas'uuliyadda shaqsiyeed, hantida shaqsiyeed, kharashaadka beddelka hantida shaqsiga, lacag -bixinnada caafimaadka, xatooyada aqoonsiga, iyo kharashaadka nolosha ee dheeraadka ah.
Waxaad ku heli kartaa xigasho onlayn ah sidoo kale waxaad ku xareyn kartaa sheegasho onlayn ah haddii aad la kulanto khasaare la daboolay. Sidoo kale, adeegga macmiilka ayaa la heli karaa toddoba maalmood toddobaadkii haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan siyaasaddaada ama aad u baahan tahay caawimaad si aad u gudbiso sheegasho.
Beeraley Aragtida iyo Culaysyada
Aad loogu qiimeeyay qanacsanaanta sheegashooyinka Lacag -hawleedku wuxuu khuseeyaa si loo bilaabo siyaasad cusub
Soo qaado xigasho ama gudbiso sheegasho onlayn ah
Caymiska qiimaha jaban, oo leh siyaasadaha ugu hooseeya $ 100 sanadkii
Beeraleyda Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
#10. Caymiska Qoyska Mareykanka: Qiimaha ugu Fiican
Caymiska Qoyska ee Maraykanku wuxuu bixiyaa caymiska kiraystayaasha oo la awoodi karo oo ay ku jiraan alaabtaada, biilasha caafimaadka, masuuliyadda dhinac saddexaad, beddelka alaabta la xaday, iyo joogitaanka hoteelka haddii aadan awoodin inaad joogtid gurigaaga kirada sabab la xiriirta dhacdo la daboolay.
Iyada oo cabirka cabashada macmiilka waxyar ka yar intii la filayay NAIC, Qoyska Mareykanka ayaa ah ikhtiyaar adag oo loogu talagalay caymiska kiraystayaasha.
Shirkaddu waxay bixisaa qiimo-dhimisyo kala duwan, oo ay ku jiraan labada ikhtiyaar ee caadiga ah (qiimo-dhimis loogu talagalay lahaanshaha caymiska baabuurka iyo kireystaha ee Qoyska Mareykanka) iyo ikhtiyaarrada hal mar ah.
Mid ka mid ah ikhtiyaarrada caymiska ee la tixgeliyo ayaa loo yaqaan hoos -u -dhaca laga dhimayo. Haddii aad tan ku darto siyaasaddaada, waxaad ku heli doontaa deyn $ 100 ah oo lagaa jari karo maalinta koowaad ee caymiska ka dibna arag lacagta lagaa jari karo $ 100 kale oo leh cusboonaysiin kasta (ugu badnaan $ 500).
Taas macnaheedu waa inaad jeebka ka bixin doonto wax yar mar kasta oo aad gudbiso sheegasho.
Caymiska Qoyska ee Maraykanka Aragtida iyo Culaysyada
Ka hel xigasho onlayn ah Qiyaasta celceliska ee ku qanacsanaanta macaamilka sheegashooyinka, sida laga soo xigtay JD Power
Ikhtiyaarada dhimista badan
Kaliforniya waxay ka mid ahayd dawladihii ugu horreeyay ee soo saaray joojinta ka saarista lacagihii kirada ee la seegay. Shirkadaha caymiska kiraystayaasha ee Kaalifoorniya waxay kordhiyeen siyaasado khuseeya habaynta sheegashooyinka iyo bixinta biilasha.
Markaa, haddii aadan helin caymiska kireystayaashaada, waxaan kugula talineynaa inaad bixiso wixii aad awooddo xitaa inta joojintu socoto.
Halkee si dhakhso leh loogu iibin karaa Buugaagta Maadda ah 2022 | Buugaag Hore & Cusub
Figo waa qorshe caymis xayawaan ah oo la gaaryeelay oo si gaar ah loogu talagalay waalidiinta xayawaannada kunka sano ah. Milkiilayaasha xayawaanka ayaa dooran kara...
Farxadda ku wehelisa helitaanka raacitaan cusub waa in aan lagu gaabin duruufo aan la filayn. Wax ku ool ah…
Dib u eegida Caymiska Milkiilayaasha Guryaha Amica 2021: Ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Waxaad naftaada ka ilaalin kartaa khasaaraha ay sababto tuuganimada ama masiibooyinka dabiiciga ah adiga oo iibsanaya siyaasadda caymiska guriga.…
Haddii aad leedahay baabuur oo aad wadato, waxaa jiri doona waqti aad u baahan doonto adeegyada…
Shirkadaha Caymiska Baabuurka ee ugu Fiican 2021
Doorashadaada shirkadda caymiska baabuurta waxay saameyn kartaa adeegga iyo qanacsanaanta aad ka hesho siyaasaddaada.…
Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka Oscar 2022: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Ahaanshaha "carruurta cusub ee xannibaadda" kama hor istaagin shirkaddan inay magac u yeelato.…